The Amazing Spider-Man2v1.1.1c [Unlimited Coins] [Offline-APK(28MB) + obb(566MB)] [$4.99 in Playstore] - အမျိုးကောင်းသား
Home » Android » Android game » The Amazing Spider-Man2v1.1.1c [Unlimited Coins] [Offline-APK(28MB) + obb(566MB)] [$4.99 in Playstore]
The Amazing Spider-Man2v1.1.1c [Unlimited Coins] [Offline-APK(28MB) + obb(566MB)] [$4.99 in Playstore]
သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး အတွက် PlayStore မှာ $4.9.9 တန် The Amazing Spider-Man2v1.1.1c လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နော်.. Ooredoo တို့ လည်း လာပြီဆိုတော့ အားလုံး အဆင်ပြေပြေ ဆွဲပြီး ကောင်းကောင်းဆော့လို့ ရပြီးနော :) ပြီးတော့ Unlimited Mod Money Game လေး ဖြစ်တာမို့ အားလုံး နှစ်ခြိုက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.. အရမ်းကောင်းတဲ့ Game လေးမို့ အားလုံးကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်.. အောက်မှာ Screenshots , Instructions လေးတွေ ဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနိုင်ပါပြီ ခဗျာ..
Install လုပ်နည်းကတော့ com.gameloft.android.ANMP.GloftASHM.zip ဖိုင်ရယ်.. The Amazing Spider Man2v1.1.1c [Unlimited Money].apk ဖိုရယ်ကိုဒေါင်းရပါမယ်..
ဒေါင်းပြီးရင် Apk ကို Install လုပ် ၊ Done နှိပ် ပေးပါ..
com.gameloft.android.ANMP.GloftASHM.zip ကို Zip ဖိုင်ဖြည်ပြီး com.gameloft.android.ANMP.GloftASHM Folder ကို Android/obb/ ရဲ့ နောက်မှာ ထည့်လိုက်ပြီး ရင် WiFi ဖွင့်(ပထမဆုံး အကြိမ်သာ) ပြီး အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ Instructions အတိုင်း ဆက်သွား ပြီးရင် အခန်း ၂ခန်း | ၃ခန်းလောက် ဆော့ပြီး ထွက်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် WiFi ကို ပိတ်ပြီး.. Money ခိုးပြီးသား Offline Version ဒီအတိုင်း ဆော့လို့ရပါပြီ... Download လုပ်ရန် အောက်ဆုံးက လင့်ကနေ တစ်ဆင့် သွားရောက် ဒေါင်းလိုက်ပါနော်.. ကောင်းသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေ ခဗျာ..
Apk နှင့် obb တို့အား install လုပ် ထည့်သွင်းပြီးပါက ဆက်လုပ်ပြီး Unlimited Coins| Offline Mode ဖြင့် ကစားနိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်း
Link နှိပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါက Open In New Tap or Window လုပ်ပြီး ဒေါင်းရန်...
ပြန်လည်တင်ပြသူ Steel Jelly အချိန် 3:23:00 AM
The Amazing Spider-Man2v1.1.1c [Unlimited Coins]...
Download or Watch Movie - The Expendables32014 D...
[For 18+ Only] Penthouse Australia - August 2014.p...
[For 18+ Only] Playboy USA - July+August 2014 (Sum...
[Restricted] [ 18+ Only] Playboy Special Collector...
[For 18+ Only] Penthouse Australia - July 2014.pdf...